Emporio Armani ရဲ့ အိတ်ဒီဇိုင်းအသစ်များ! – FemaleWear.net
ဒီတခေါက်မှာတော့ Emporio Armani ရဲ့ လူကြိုက်များပြီး အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Mini Shoulder bag လေးတွေကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
၁. ဒေါ်လာ ၁၉၅ ဖြစ်ပြီး အရောင်အားဖြင့် Beige, Black & Midnight Blue ဆိုပြီး သုံးရောင်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ကြိုးသိုင်းလွယ်လို့ရတဲ့ အိတ်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီး ကြိုးကို Adjust လုပ်နိုင်အောင် ဖန်တီးထားပါတယ်။ တအိတ်လုံးကို သားရေနဲ့ ချုပ်လုပ်ထားပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လွယ်လို့ရအောင် လူငယ်စတိုင်ဖန်တီးပြုလုပ်ထားပါတယ်။
၂. အရောင်အားဖြင့် အနီနဲ့ အမည်းထုတ်လုပ်ပြီး တအိတ်လုံးကို နွားသားရေကိုအခြေခံပြီး ချုပ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ၆၄၅ ဒေါ်လာဖြစ်ပြီး Internal pocket လေးလည်း ပါပါတယ်။ Emporio Armani Metal Logo ကို အဓိကထားပုံဖော်ထားတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ အလွယ်တကူပိတ်ဖွင့်လို့ရအောင် ဇစ်နဲ့ချုပ်လုပ်ထားပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ တည်ငြိမ်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်သလို ပေါ့ပါးသွက်လက်တဲ့ အသွင်ကိုလည်းပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
၃. အရောင်အားဖြင့် အစိမ်းနဲ့ ပန်းဆီရောင်လေးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အတွင်းမှာ သီးသန့် Pocket အသေးလေးပါဝင်ပြီး ကြိုးကိုဖြုတ်လို့တပ်လို့ရအောင်ဖန်တီးထားပါတယ်။ အိတ်ရဲ့အနောက်ဖက်မှာလည်း ရွှေ​ရောင် Emporio Armani တံဆိပ် လေးကိုထုနှိပ်ထားတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ၄၉၅ ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
၄. ဒီအိတ်လေးကိုတော့ သားရေနဲ့ပဲထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ငါးသရဖူဆောင်းထားတဲ့ Metal Logo လေးနဲ့ တွဲဖက်ပုံဖော်ထားပါတယ်။ အနီနဲ့ မီးခိုးရောင်အဖျော့ဆိုပြီး အရောင်နှစ်ရောင်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ကြိုးကိုဖြုတ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်သလို ကြိုးတပ်ပြီးလည်းပေါ့ပေါ့ပါးပါးအသွင်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဇစ်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အလွယ်တကူအပိတ်အဖွင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၆၄၅ ဖြစ်ပါတယ်။